Na akwụkwọ ahụ aja maka Android | Gam akporosis
Obodo kachasị mma, osimiri kachasị mma nrọ ma ọ bụ oke ugwu mara mma na-echere gị na ngalaba a nke akwụkwọ ahụaja ihu igwe maka ekwentị gam akporo gị. Okirikiri Okirikiri ala na ị rọrọ na-enwe ike ịmata na onye, ​​na nke ịgbanwe ọdịdị gị gam akporo ekwentị na a nnọọ mfe ụzọ.
Chọpụta ụdị ala ndị a niile dị iche iche ị hụrụ na gallery a. N'ezie enwere okirikiri dabara na ekwentị gam akporo gị n'ụzọ zuru oke. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ akwụkwọ ahụ aja nwere ihu ala, ị gaghị echefu nzụlite ọ bụla na ngalaba a.
Echerela ogologo oge ma budata ya fondos de pantalla de ala kasị adọrọ mmasị gị gam akporo. Osimiri, obodo ma ọ bụ ugwu, nhọrọ anyị na-ahụ maka akwụkwọ ahụaja ga-akpọrọ gị gaa ebe ndị dị egwu, yabụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ha oge ọ bụla ị gbanye ihuenyo nke ama ma ọ bụ mbadamba gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ karịa free na akwụkwọ ahụ aja maka mbadamba ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka, na njikọ nke anyị tinyere ugbu a ị ga-ahụ ha.